(3) - BookCubicle
Anna : Coffee Chapter (2/5). Thanks for the coffee Sis Myat Su May ^^ Enjoy the chapter nya~~~
အပိုငျး - ၃ : ငါ ဆံပငျညှပျဆိုငျကောငျးကောငျးတဈဆိုငျသိတယျ။
ကြောငျးဆငျးတာနဲ့အိမျကို ပွနျရတော့မယျဆိုတဲ့အသိနဲ့လုံးနအေောငျပွေးဖို့ပွငျနတေဲ့ ယှနျးခြီတဈယောကျ အနောကျက ချေါတဲ့အသံကွောငျ့ ရပျသှားခဲ့ရတယျ။ စကျရုပျလေးတဈရုပျလို သူ တုံ့နှေးနှေးပွနျလှညျ့ကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ မွငျလိုကျရတဲ့ လူကွောငျ့ လနျ့လှနျးလို့ ဝိညာဉျပါ ပြောကျခငျြသှားတယျ။ ဘယျလိုဖွဈပွီး သူကို ကွကျမောကျသီးက လာချေါနရေတာလဲ။ ကွကျမောကျသီး မကွိုကျတဲ့ အရောငျကို သူ မဝတျထားလောကျပါဘူးနျော။ ယှနျးခြီတဈယောကျ စိတျထဲကနေ ဘုရားပေါငျးစုံ တနတေော့တယျ။
ကွောကျပွီးပွနျမဖွတောကွောငျ့လားတော့မသိ။ ကွကျမောကျသီးကောငျလေးက ယှနျးခြီဆီကို လှမျးလာတယျ။ ယှနျးခြီကတော့ သူ့ရဲ့လှယျအိတျကွိုးလေးကို တငျးတငျးကိုငျပွီးတော့ နောကျကိုဆုတျသှားတော့တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူက နောကျဆုတျလိုကျ ကွကျမောကျသီးက ရှတေို့းလာလိုကျ ဖွဈနရောကနေ ယှနျးခြီတဈယောကျ ကြောငျးအပေါကျဝနားက ခယျြရီပငျနဲ့ကပျသှားတော့တယျ။ ခယျြရီပှငျ့ဖတျတခြို့က လှငျ့ခနဲပဲ။
ပငျစညျနဲ့ကြောနဲ့ ကပျနတောကွောငျ့ ဆကျပွေးလို့လညျး မလှတျနိုငျဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့ ယှနျးခြီ မကျြလုံးတှကေို အတငျးမှိတျထားလိုကျတော့တယျ။ ဘာဖွဈလို့ သူ့ကံက သိပျဆိုးနရေတာလဲ။ သူ တကယျပဲ ကွကျမောကျသီး မကွိုကျတဲ့ အရောငျကို ဝတျထားမိတာလား။ အထိုးခံရရငျတော့ ဟနျနာက သူ့ကိုဆေးထညျ့ပေးမှာပါလုိ့ တှေးပွီးတော့ ယှနျးခြီ ခေါငျးလေးငုံ့မကျြလုံးလေးမှိတျထားလိုကျတယျ။ စိတျထဲမှာလညျး အထိုးခံရရငျ ဘယျလောကျနာမလဲလို့ သူ တှေးနမေိတယျ။ ဘာကွောငျ့ဆို သူ တဈခါလေးတောငျ အထိုးမခံဖူးဘူးလေ။
"မငျးက ဘာလို့ ခေါငျးအတငျးငုံ့နတောလဲ..."
ခပျဆတျဆတျအမေးကွောငျ့ ယှနျးခြီမကျြလုံးကို မရဲတရဲဖှငျ့တယျ။ ကွကျမောကျသီးရဲ့ မကျြခုံးနှဈဖကျထိလုနီးပါး တှနျ့ခြိုးနတောကို မွငျရခြိနျမှာ သူတော့ ကွကျမောကျသီးကို စိတျဆိုးအောငျလုပျမိလို့ သှားပါပွီဆိုတဲ့ပုံမြိုးနဲ့ မကျြလုံးထပျမှိတျထားလိုကျတယျ။ ဟုတျသားပဲ သူ မကျြလုံးမှိတျထားတာကို ကွကျမောကျသီးက မမွငျရဘူးလေ။ သူ့ဆံပငျတှကေ မကျြမှနျပျေါကိုပါ ဖုံးနတောကွောငျ့ ကွကျမောကျသီးက ဘယျသိပါ့မလဲ။
တကယျတော့ ယှနျးခြီသူ့ရဲ့အရှဆေံ့ပငျကို ညှပျမလို့ပါပဲ။ သူက လူကွောကျတာကွောငျ့ ဆံပငျညှပျဆိုငျကို သှားမယျဆိုရငျ ဟနျနာမပါလို့မဖွဈဘူးလေ။ ဟနျနာအားတဲ့နကေို့စောငျ့ရငျး သူ့ ဆံပငျတှကေ အခုလိုပဲဖွဈလာတာ။
"မငျးရဲ့ အရှဆေံ့ပငျတှကေ စိတျပကျြစရာကောငျးလိုကျတာ..."
သူ့နဖူးရှငျးသှားတယျလို့ ယှနျးခြီခံစားလိုကျရတယျ။ သူ့အရှဆေံ့ပငျတှကေို ကွကျမောကျသီးက စုကိုငျလိုကျတာပဲ။ ဘောငျးဘီအိတျကပျထဲက သားရပေငျတဈကှငျးနဲ့ ယှနျးခြီအရှဆေံ့ပငျတှကေို ထောငျထောငျလေးဖွဈအောငျ သူက ခြီလိုကျတယျ။ ရုတျတရကျဆနျလှနျးတဲ့ ကွကျမောကျသီးရဲ့အပွုအမူကွောငျ့ ယှနျးခြီရဲ့မကျြတောငျတှကေ ပုတျခတျပုတျခတျပေါ့။
ဆံပငျတှအေုပျနတောကွောငျ့ စိတျမရှညျနိုငျတဲ့ ခနျ့ဝသေျောတဈယောကျ ယှနျးခြီရှကေ့ ဆံပငျတှကေို ဆှဲစုစညျးပေးလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ယှနျးခြီရဲ့မကဉျြးမကယျြနဖူးလေးထှကျလာတယျ။ နောကျတော့ မကျြမှနျအောကျက မကျြလုံးတောကျတောကျလေးတှေ။ ဒီမကျြလုံးလေးတှကေ သူ့ရဲ့နတျဘုရားမလေးမကျြလုံးတှနေဲ့တူတယျလို့ ခနျ့ဝသေျောခံစားလိုကျရတယျ။ ယောကျြားလေးတဈယောကျရဲ့ မကျြတောငျတှကေ အဲ့လောကျထိ ရှညျဖို့ လိုအပျလို့လား။ ယှနျးခြီရဲ့ မကျြတောငျတှကေ ရှညျတဲ့အပွငျကော့လညျးကော့နတောပဲ။ ယှနျးခြီရဲ့မကျြလုံးတောကျတောကျလေးတှကေတော့ မကျြကပျမှနျကူထားတာမဟုတျဘူးဆိုတော့ သူ့ရဲ့အလှနတျဘုရားမလေးရဲ့ ဓာတျပုံထဲက မကျြလုံးလေးတှကေ မကျြကပျမှနျကူထားတာမြားလား။
အာ... သူ အခု သူ့ရဲ့အလှနတျဘုရားမလေးနဲ့ ယှနျးခြီကို နှိုငျးယှဉျနမေိတာလား?! ဒါ... ဒါက အရမျးကို မိုကျရိုငျးတဲ့အတှေးပဲ! သူ့ရဲ့အလှနတျဘုရားမလေးကတော့ စိတျမကောငျးဖွဈတော့မှာပဲ!
ခနျ့ဝသေျောရဲ့အတှေးတှကေို ယှနျးခြီကွားရငျတော့ ရယျရမလား ငိုပဲငိုရတော့မလားလို့ တှေးနတေော့မှာပါပဲ။ အခြိနျအကွာကွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ သူတို့စိုကျကွညျ့နကွေပွီးမှ ခနျ့ဝသေျောစကားပွနျစတယျ။
"မငျးက ငါတို့အုပျစုနဲ့ Assignment အတူတူလုပျဖို့ ကတြာမဟုတျလား..."
ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို လာရှာတဲ့အဓိကအကွောငျးက Assignment ဆိုတာကို သိတော့မှပဲ ယှနျးခြီရဲ့စိတျထဲက အလုံးကွီးပွနျကသြှားတော့တယျ။ တျောသေးတာပေါ့! သူ အထိုးမခံရတော့ဘူး။
ယှနျးခြီရဲ့အသံသေးသေးလေးကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျော သူ့ကို ကဉျြစကျနဲ့အတို့ခံလိုကျရသလို ခံစားလိုကျရတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့ အသံက ဘာလို့ သေးသေးညကျညကျလေးဖွဈနရေတာလဲ။ ယောကျြားလေးမဆနျလိုကျတာ။
ကိုယျ့အုပျစုထဲကကောငျတှအေကွောငျးကို သိတာကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျော ခပျပွတျပွတျပဲပွောလိုကျတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့နဖူးရှထေ့ောငျနတေဲ့ဆံပငျလေးက ခကျြခငျြးညှိုးကသြှားသလိုပဲ။ နောကျပွီးတော့ မကျြနှာလေးရောပဲ။ ဒါပေါ့ ဘယျသူက တဈဖှဲ့လုံးစာ Assignment ကို တဈယောကျတညျး လုပျခငျြမှာလဲလေ။ အသငျးအဖှဲ့နဲ့အလုပျလုပျတယျဆိုတာ လုပျငနျးတာဝနျတှကေို ခှဲဝလေုပျကွဖို့လေ။ အဲ့ဒါကို စူပါမနျးလုပျပွီး တဈကိုယျတျောရှိုးအနနေဲ့တော့ ဘယျသူမှ မလုပျခငျြကွပါဘူး။
"ငါ... ငါ ဝိုငျးလုပျပေးမယျ..."
လှယျအိတျကွိုးလေးတငျးတငျးကိုငျပွီး တဈယောကျတညျးမလုပျခငျြဘူးဆိုတဲ့မကျြနှာနဲ့ပမေဲ့ သူ့ကို ပွနျလညျးမပွောရဲတဲ့ ယှနျးခြီကို ခနျ့ဝသေျောအထဈထဈအငေါ့ငေါ့နဲ့ပွောတယျ။ သူ တဈယောကျယောကျကို စကားအကွာကွီးမပွောဖူးဘူးလေ။ သူ လူတဈယောကျနဲ့ ဆယျစက်ကနျ့လောကျတဈနရောတညျးမှာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျရှိတာက ရနျဖွဈဖို့ပဲဖွဈတယျ။ သုံးစက်ကနျ့လောကျ မကျြလုံးခငျြးဆုံတာက ဆှဲထိုးဖို့ပဲဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယှနျးခြီနဲ့နှဈယောကျတညျး အခုလို ရနျမဖွဈဘဲ အကွာကွီး မကျြနှာခငျြးဆိုငျနရေတာက သူ့ကို အနညျးငယျအို့တို့အမျးတနျးဖွဈစတေယျ။
ဝိုငျးလုပျပေးမယျဆိုတဲ့ စကားကို ကွားတာနဲ့ ယှနျးခြီခေါငျးလေးငုံ့ပွီး မပွောရဲလို့ စိတျထဲမှာ အောငျ့သကျသကျဝလုံးလေးတှရေေးနရောကနေ ခေါငျးကို ဆတျခနဲမော့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောကတော့ သူ့နားထငျကိုသူ လကျညှိုးလေးနဲ့ကုတျနခေဲ့တယျ။ အနညျးငယျ နီသလိုလိုဖွဈနတေဲ့ မကျြနှာက ခနျ့ဝသေျောက သူ့စကားအတှကျ သူ ရှကျနတေယျလို့ ပွောပွနသေလိုပါပဲ။
ကွကျမောကျသီးရဲ့ ဘယျသူတဈယောကျမှ မမွငျဖူးလောကျတဲ့ အမူအရာကွောငျ့ ယှနျးခြီအံ့သွသှားတယျ။ နောကျတော့ သူ ပွုံးပွီး...
ယှနျးခြီရဲ့အပွုံးတှကေ ခယျြရီပနျးတှလေိုပဲ လှတယျ။ လအေဝကွေ့ောငျ့ ကွှကေလြာတဲ့ ခယျြရီပှငျ့ဖတျတခြို့က ယှနျးခြီရဲ့ခေါငျးပျေါနဲ့ သူတို့နားထပျကလြာပွနျတယျ။ ယောကျြားလေးတဈယောကျ ပွုံးတာက အရမျးကိုပဲ လှလားလို့ ခနျ့ဝသေျောတှေးဖွဈတယျ။ သူ သားရပေငျနဲ့စညျးထားတာကွောငျ့ ယှနျးခြီရဲ့မကျြနှာကို အုပျနတေဲ့ဆံပငျတှလေညျး မရှိတော့တာကွောငျ့ လေးကိုငျးလိုမှိတျကသြှားတဲ့ မကျြလုံးလေးတှကေိုလညျး သူ မွငျလိုကျရတယျ။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ မကျြနှာတဈခုလုံးနီသှားသလို သူ့ရငျကလညျး တဒိတျဒိတျခုနျလာတော့တယျ။ ယှနျးခြီရဲ့အခုလိုပွုံးလိုကျတဲ့ ပုံစံက ဘာလို့ သူ့နတျဘုရားမလေးနဲ့ တူနတောလဲ။ ယှနျးခြီရဲ့ နာမညျတဈလုံးကလညျး သူ့နတျဘုရားမလေးနဲ့ တူနသေေးတယျ။
ခနျ့ဝသေျော အလေးအနကျစဉျးစားလိုကျတယျ။ သူတို့နှဈယောကျက မောငျနှမမြားလား?!
"Assignment လုပျဖို့အတှကျ ငါတို့ခြိနျးစရာရှိတာ၊ ပွောစရာရှိတာပွောရအောငျ မငျးရဲ့ account ပေး..."
ခနျ့ဝသေျောရဲ့ရုပျတညျကွီးနဲ့စကားကွောငျ့ ယှနျးခြီခေါငျးညိတျပွီး ပေးမလိုလုပျပွီးမှ အရေးကွီးတာကို သတိရသှားတော့တယျ။ စိတျထဲမှာ အရမျးလနျ့သှားတာကွောငျ့ လကျကတုနျပွီး ဖုနျးတောငျ လှတျကတြော့မလိုပဲ။ လှတျကမြလိုဖွဈသှားတဲ့ ဖုနျးကို ယှနျးခြီအသအေကွဖေမျးလိုကျပွီးတော့ ခနျ့ဝသေျောကို ကွညျ့တယျ။
ယှနျးခြီရဲ့မကျြနှာသလေေးနဲ့ လိမျလိုကျမှုကို ခနျ့ဝသေျောက သံသယမဝငျခဲ့ဘူး။ သူ့စိတျထဲမှာ ဟိုကျပါကောငျလေးက သူတို့လို SNS တှမေသုံးတာက ဟုတျလောကျတယျလို့ပဲ ထငျနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ အရမျးကွီးတှေးမနတေော့ဘူး။
"အဲ့ဒါဆိုရငျ ငါ့ကို ဖုနျးနံပတျပေး... ငါ ဖုနျးဆကျတာဖွဈဖွဈ message က တဈဆငျ့ဖွဈဖွဈ ဆကျသှယျလိုကျမယျ... မငျး Viber လောကျတော့သုံးတယျမဟုတျလား..."
ခနျ့ဝသေျောရဲ့ မယုံသကာင်္မဖွဈမှုကွောငျ့ ယှနျးခြီစိတျသကျသာရာရသှားပွီးသူ့ရဲ့ဖုနျးနံပတျကို လှယျလှယျကူကူပဲ ပေးလိုကျတော့တယျ။ သူ ခနျ့ဝသေျောကို သူ့အကောငျ့ကွီးကို ပေးလို့မဖွဈဘူးလေ။ မဟုတျရငျ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို ယှနျး မှနျးသိသှားမှာပေါ့။ အဲ့ဒီအခြိနျကရြငျ ဘာဖွဈနိုငျလဲ ယှနျးခြီတှေးတောငျမတှေးရဲဘူး။ ခနျ့ဝသေျောက ယှနျးကို အရမျးသဘောကတြာကွောငျ့ သူသာ ယှနျးဆိုတာကို သိရငျ...
အတှေးနဲ့တငျ ယှနျးခြီကြောခမျြးသှားတယျ။ ကောလဟလတှအေရဆိုရငျ ခနျ့ဝသေျောက ရနျဖွဈလို့လကျလှနျရငျ တောငျပျေါကနေ လူတှကေိုပဈခတြာတဲ့။ ဒါကွောငျ့ ပြောကျသှားတဲ့လူတှကေို ပွနျမတှတေ့ာတဲ့။ သူ အဲ့ဒီလူတှနေဲ့ သှားဆုံရလောကျတယျ။ ယှနျးခြီ တှေးရငျးနဲ့ကွကျသီးဖွနျးဖွနျးထလာတော့တယျ။ ဟငျ့အငျး သူက ယှနျးဆိုတာ ခနျ့ဝသေျော သိလို့မရဘူး။ ဒါက သူ သတေဲ့အထိ တိတျတိတျလေး သိမျးသှားမဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြပဲ!
"ဒါဆို ငါ ပွနျတော့မယျနျော..."
ကိုယျ့အတှေးနဲ့ကိုယျ ကွောကျနပွေီမို့ ယှနျးခြီတဈယောကျ ခနျ့ဝသေျောရှေ့ လဈထှကျဖို့ကို ကွံစညျတော့တာပေါ့။ သူ ကားမှတျတိုငျသှားမယျ၊ ကားစီးမယျ။ အိမျပွနျရောကျရငျ ပှနျးခြိကို အစာကြှေးမယျ။ ပွီးရငျစာလုပျမယျ။ ဘာလို့ဆို ဟနျနာက ဝတျစုံသဈတဈစုံခြုပျနတောမို့ သူ့ဆီကို မလာနိုငျသေးဘူးလေ။ သူ အသဈတဈပုံတငျထားတာက မကွာမှ မကွာသေးတာပဲ။
ခနျ့ဝသေျောရဲ့အဖွကေိုစောငျ့တောငျမနဘေဲ ယှနျးခြီတဈယောကျလှညျ့လိုကျတော့တယျ။ သူ လှညျ့နတေုနျးမှာ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အသံက ထှကျလာတော့တာပဲ။ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို ယှနျးလို့သိသှားပွီလားဆိုတဲ့ ကွောကျစိတျနဲ့ ယှနျးခြီ ပွနျလှညျ့ကွညျ့ရပွနျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ပါးကို လကျညှိုးနဲ့ကုတျနပွေနျပွီးတော့...
"ငါ မငျးကို ပွနျလိုကျပို့ပေးမယျ..."
ယှနျးခြီရဲ့မကျြလုံးတှဝေိုငျးစကျသှားတော့တယျ။ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကိုသံသယဝငျနပွေီလား! တဈခုခုကို ရိပျမိသှားတာလား! ဒါကွောငျ့ပဲ သူ့အိမျထိလိုကျစဈတော့မှာလား! သူတော့ တောငျအောကျကို ရောကျတော့မှာလား! ပြောကျသှားတဲ့သူတှနေဲ့သှားဆုံစညျးရတော့မှာလား! အမရေေ... သားပြောကျနရေငျ သားအလောငျးလေးကိုတော့ တှအေ့ောငျ ရှာပါနျော... ယှနျးခြီအတှေးတှကေ ယောကျယကျခတျသှားတော့တယျ။
"ဘာလို့ဆို Assignment ကို မငျးအိမျမှာလညျး လုပျရနိုငျတာမို့ ငါ မငျးအိမျကို သိဖို့လိုတယျလေ..."
ယှနျးခြီပါးစပျလေးအိုပုံသဏ်ဍနျဖွဈသှားပွီး ခနျ့ဝသေျောကို ခေါငျးညိတျပွတယျ။ စိတျထဲကတော့ အလုံးကွီးကသြှားတော့တာပေါ့။ ခနျ့ဝသေျောရဲ့အတှေးတှကေ အမွဲတမျး Assignment မှာ ရှိနတောပဲ။ တျောသေးတယျ!
ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို ယှနျးခြီငွငျးမှာစိုးလို့ ထပျတောငျပွောမိသေးတယျ။ ယှနျးခြီက သူ့နတျဘုရားမလေးနဲ့ နညျးနညျးတူတယျလို့ ခံစားရတာကွောငျ့ သူ ယှနျးခြီအနားမှာ အခြိနျနညျးနညျးလေးဖွဈဖွဈပိုရှိခငျြစိတျဖွဈနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ ယှနျးခြီကိုလညျး သူ မသိစခေငျြဘူး။ နောကျပွီး တခွားသူတှလေညျး မသိစခေငျြဘူး။ ဘာလို့ဆို ဒါက မဟာအရှကျကှဲမဲ့ကိစ်စကွီးလေ။ သူ တဈကြောငျးလုံးက ဖိနျ့ဖိနျ့တုနျအောငျကွောကျရတဲ့ ခနျ့ဝသေျောက အခုလိုမြိုး ကောငျလေးတဈယောကျနားမှာ အခြိနျဖွုနျးခငျြတယျဆိုတာကွီးက လူဟားစရာကွီးဖွဈနမှောပေါ့။ ပွီးတော့! ယှနျးခြီလညျး ပြျောမှာမဟုတျပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ဘယျယောကျြားလေးမှ သူတို့ကို မိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့ တူတာကွောငျ့ဆိုပွီး ပွောဆိုရငျ ကွိုကျမယျလို့ သူ မထငျဘူးလေ။
ယှနျးခြီခေါငျးလေးငုံ့ပွီး သဘောတူလိုကျတယျ။ ခနျ့ဝသေျောက Assignment နဲ့ပတျသကျတာကို တှေးနသေရှေ့ ယှနျးခြီစိတျထဲ ကွောကျမနပေါဘူး။ ခနျ့ဝသေျောက ကောလဟလတှလေောကျ ကွောကျဖို့မကောငျးဘူးပဲလို့ ယှနျးခြီတှေးလိုကျသေးတယျ။ သူ့ရဲ့အပွငျအဆငျတှကေ နညျးနညျးလေး လမျးသူရဲဆနျပမေဲ့ ခနျ့ဝသေျောက သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တဈဖှဲ့တညျးကတြဲ့သူတှကေိုတော့ နညျးနညျးဂရုစိုကျတတျပုံရပါတယျ။ အခုပဲကွညျ့လေ။ သူတို့က အခုမှ စကားပွောဖူးကွပမေဲ့ ခနျ့ဝသေျောက သူ့ကို အိမျလိုကျပို့ပေးတယျ။
ယှနျးခြီက ဆိုငျကယျစီးတတျပမေဲ့ သူ့အိမျက သူ့ကိုစိတျမခတြာကွောငျ့ ဘတျဈကားနဲ့ပဲ ကြောငျးတကျကြောငျးဆငျး လုပျရတယျ။ ဘတျဈကားခက မြားလှတယျတော့မဟုတျပမေဲ့ ပိုကျဆံကိုတော့ ယှနျးခြီခွှတောခငျြတယျ။ ဘာလို့ဆို သူ လိုခငျြတာလေးတှေ ဝယျလို့ရနိုငျတယျလေ။ ဒီတော့ ခနျ့ဝသေျောသာ သူ့ကို အမွဲတမျးလိုကျပို့ရငျကောငျးမှာပဲလို့ ယှနျးခြီစဉျးစားမိတယျ။ ဒါဆို တဈလစာ ဘတျဈကားခကို သူ မုနျ့စားလို့ရပွီ! လမျးထိပျက အသဈဖှငျ့တဲ့ bakery လေးက ကိတျမုနျ့လေးတှေ သူ စားခငျြတယျ!
ခနျ့ဝသေျောကတော့ ယှနျးခြီရဲ့စိတျထဲမှာ သူက ဖရီးကယျရီဖွဈသှားတာကို မသိလိုကျရှာပါဘူး။ ဆိုငျကယျစကျကို နှိုးပွီးတော့ ယှနျးခြီကို ဆိုငျကယျစီးဦးထုပျကို သူ ကမျးပေးလိုကျတယျ။
"မငျး ဆောငျးထားလိုကျ... တောငျအဆငျးလကေ အေးတယျ..."
ယှနျးခြီရဲ့ပုံက ခပျပြော့ပြော့လေးမို့ မလိုအပျဘဲ ယှနျးခြီနမေကောငျးဖွဈသှားမှာကို သူ မလိုခငျြဘူး။ ဒါကွောငျ့ ခနျ့ဝသေျော ယှနျးခြီကို သူဆောငျးရမဲ့ဦးထုပျကပေးလိုကျတာပဲဖွဈတယျ။
ယှနျးခြီရဲ့မဝံ့မရဲမေးသံက ရှကျရိပျနှေးနှေးပါနသေလိုပါပဲ။ ခနျ့ဝသေျော သူ့ရငျထဲကို ကွောငျလေးတဈကောငျက လကျသညျးသေးသေးထုတျပွီးတော့ ကြီစားလိုကျသလိုခံစားလိုကျရတယျ။ ခပျတညျတညျနဲ့စိတျကို ပွနျထိနျးပွီး သူ ယှနျးခြီကို ကွညျ့တယျ။
တောငျအဆငျးမှာ ခနျ့ဝသေျောရဲ့ ရငျက နှေးနခေဲ့တယျ။ အရငျတုနျးကဖွတျလာတဲ့ လမျးတှကေ ဒီနေ့ ပိုလှနသေလိုပဲ။ ယှနျးခြီက သူ့ခါးကို ခပျတငျးတငျးဖကျထားတယျ။ ဦးထုပျခံနတောကွောငျ့ ယှနျးခြီရဲ့ပါးက သူ့ကြောကို အပျမနနေိုငျခဲ့ဘူး။ ခနျ့ဝသေျော စိတျထဲနညျးနညျးလေး နောငျတရခငျြသှားတယျ။ သူ ဦးထုပျကိုသာ မပေးခဲ့ရငျ ယှနျးခြီက သူ့ ကြောမှာ မကျြနှာဝှကျလောကျတယျလေ။
တိတျ! ငါ ဘယျလိုတှတှေေးနတောလဲ! ခနျ့ဝသေျော စိတျထဲကနပေဲ သူ့ကိုယျသူ အျောလိုကျတယျ။ သူ့နှလုံးသားမှာ နတျဘုရားမလေးရှိနတောကို သူက ဘာကိစ်စနဲ့ ယှနျးခြီအကွောငျးပဲ စဉျးစားနရေတာလဲ! ဒါက လုံးဝကို မိုကျမနဘေူး!
ဘယျလိုပဲ ခနျ့ဝသေျော သူ့ကိုယျသူ ယှနျးအကွောငျးတှေးနနေေ သူ့ခါးကိုတငျးတငျးဖကျထားတဲ့ ယှနျးခြီရဲ့ လကျလေးတှကွေောငျ့ သူ့နှုတျခမျးတှပွေုံးနမေိတယျဆိုတာကိုတော့ သူ ဝနျခံရပါလိမျ့မယျ။
ယှနျးခြီအိမျရှရေ့ောကျခြိနျမှာ ခနျ့ဝသေျောရဲ့မကျြနှာတဈခုလုံးက အေးစကျနပွေီ။ လတေိုကျတာကို နောကျစရာမြားမှတျလို့။ သူတော့ အိမျရောကျတာနဲ့နှေးနှေးထှေးထှေးသာ မနဘေူးဆိုရငျ မနကျဖွနျ ဖြားလိမျ့မယျ။ ဒါ လုံးဝသခြောတယျ။
"ကြေးဇူးတငျပါတယျ... မငျး အိမျပွနျရောကျရငျ ဂရုစိုကျဦးနျော..."
ယှနျးခြီရဲ့အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ဂရုစိုကျမှုက ခနျ့ဝသေျောရဲ့ အေးနတေဲ့မကျြနှာကို ခကျြခငျြးကို နှေးသှားစတေယျ။ သူ ခပျတောငျ့တောငျ့ပဲ ခေါငျးညိတျပွပွီး ယှနျးခြီကမျးပေးတဲ့ ဆိုငျကယျဦးထုပျကို လှမျးယူတယျ။ ယှနျးခြီရဲ့လကျနဲ့သူ့လကျက မတျောတဆထိသှားလရေဲ့။ သူတို့နှဈယောကျလုံးရဲ့ မကျြနှာက ပွိုငျတူနီးပါး ခပျရဲရဲဖွဈသှားကွတယျ။ သူတို့ တဈယောကျကို တဈယောကျ မကွညျ့ကွတော့ဘူး။ ဘာကွောငျ့မှနျးလညျး သူတို့ကိုယျသူတို့ မသိကွဘူး။ ဒါပမေဲ့လညျး တဈယောကျကိုတဈယောကျ မကွညျ့ရဲတာတော့အမှနျပါပဲ။
ဆိုငျကယျစီးဦးထုပျကို ကိုငျရငျးကနေ ခနျ့ဝသေျော သူ့ခေါငျးကို စှပျမလို့လုပျတယျ။ ယှနျးခြီကတော့ သူ ဆိုငျကယျမထှကျမခငျြး တဈထပျခှဲတိုကျပုလေးရှိတဲ့ခွံဝနျးရှမှေ့ာ ရပျနပေေးမယျထငျပါရဲ့။
ယှနျးခြီကို ခနျ့ဝသေျော စကားစတယျ။ ယှနျးခြီကလညျး သူ့ စလှယျသိုငျးလှယျထားတဲ့ လှယျအိတျကွိုးလေးကို ခပျတငျးတငျးကိုငျပွီး ခနျ့ဝသေျောကို ခေါငျးငုံ့နရောကနေ မော့ကွညျ့လာတယျ။
"မငျး ဆံပငျတှရှေညျနတောကွောငျ့ ငါ ဆံပငျညှပျဆိုငျကို လိုကျပို့ပေးမယျလေ... ငါ သိတဲ့ဆံပငျညှပျဆိုငျ ကောငျးကောငျးရှိတယျ..."
ခနျ့ဝသေျော ဒီစကားကိုပွောတဲ့အခြိနျမှာ သူ ယှနျးခြီကို ကွညျ့မနခေဲ့ပါဘူး။ သူ့ မကျြနှာတဈခုလုံးက နီရဲနတေယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ သူ ဒီနရောကနေ ဆိုငျကယျအမွနျမောငျးပွီး ထှကျပွေးသှားလိုကျခငျြတယျ။
"အငျး အသေးစိတျကို မငျးအိမျရောကျရငျပွောလေ..."
ဆိုငျကယျစီးပွီးပွနျတဲ့ လမျးတဈလြှောကျမှာတော့ ခနျ့ဝသေျောရဲ့နားထဲမှာ ယှနျးခြီရဲ့အသံသေးသေးလေးက ပဲ့တငျထပျနဖွေဈခဲ့တယျ။ သူ့မကျြနှာမှာလညျး အပွုံးပနျးတှနေဲ့ပေါ့။
အပိုင်း - ၃ : ငါ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ဆိုင်သိတယ်။
ကျောင်းဆင်းတာနဲ့အိမ်ကို ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့လုံးနေအောင်ပြေးဖို့ပြင်နေတဲ့ ယွန်းချီတစ်ယောက် အနောက်က ခေါ်တဲ့အသံကြောင့် ရပ်သွားခဲ့ရတယ်။ စက်ရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို သူ တုံ့နှေးနှေးပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ လူကြောင့် လန့်လွန်းလို့ ဝိညာဉ်ပါ ပျောက်ချင်သွားတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး သူကို ကြက်မောက်သီးက လာခေါ်နေရတာလဲ။ ကြက်မောက်သီး မကြိုက်တဲ့ အရောင်ကို သူ မဝတ်ထားလောက်ပါဘူးနော်။ ယွန်းချီတစ်ယောက် စိတ်ထဲကနေ ဘုရားပေါင်းစုံ တနေတော့တယ်။
ကြောက်ပြီးပြန်မဖြေတာကြောင့်လားတော့မသိ။ ကြက်မောက်သီးကောင်လေးက ယွန်းချီဆီကို လှမ်းလာတယ်။ ယွန်းချီကတော့ သူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ကြိုးလေးကို တင်းတင်းကိုင်ပြီးတော့ နောက်ကိုဆုတ်သွားတော့တာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူက နောက်ဆုတ်လိုက် ကြက်မောက်သီးက ရှေ့တိုးလာလိုက် ဖြစ်နေရာကနေ ယွန်းချီတစ်ယောက် ကျောင်းအပေါက်ဝနားက ချယ်ရီပင်နဲ့ကပ်သွားတော့တယ်။ ချယ်ရီပွင့်ဖတ်တချို့က လွင့်ခနဲပဲ။
ပင်စည်နဲ့ကျောနဲ့ ကပ်နေတာကြောင့် ဆက်ပြေးလို့လည်း မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့ ယွန်းချီ မျက်လုံးတွေကို အတင်းမှိတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ သူ့ကံက သိပ်ဆိုးနေရတာလဲ။ သူ တကယ်ပဲ ကြက်မောက်သီး မကြိုက်တဲ့ အရောင်ကို ဝတ်ထားမိတာလား။ အထိုးခံရရင်တော့ ဟန်နာက သူ့ကိုဆေးထည့်ပေးမှာပါလုိ့ တွေးပြီးတော့ ယွန်းချီ ခေါင်းလေးငုံ့မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း အထိုးခံရရင် ဘယ်လောက်နာမလဲလို့ သူ တွေးနေမိတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို သူ တစ်ခါလေးတောင် အထိုးမခံဖူးဘူးလေ။
"မင်းက ဘာလို့ ခေါင်းအတင်းငုံ့နေတာလဲ..."
ခပ်ဆတ်ဆတ်အမေးကြောင့် ယွန်းချီမျက်လုံးကို မရဲတရဲဖွင့်တယ်။ ကြက်မောက်သီးရဲ့ မျက်ခုံးနှစ်ဖက်ထိလုနီးပါး တွန့်ချိုးနေတာကို မြင်ရချိန်မှာ သူတော့ ကြက်မောက်သီးကို စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မိလို့ သွားပါပြီဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ မျက်လုံးထပ်မှိတ်ထားလိုက်တယ်။ ဟုတ်သားပဲ သူ မျက်လုံးမှိတ်ထားတာကို ကြက်မောက်သီးက မမြင်ရဘူးလေ။ သူ့ဆံပင်တွေက မျက်မှန်ပေါ်ကိုပါ ဖုံးနေတာကြောင့် ကြက်မောက်သီးက ဘယ်သိပါ့မလဲ။
တကယ်တော့ ယွန်းချီသူ့ရဲ့အရှေ့ဆံပင်ကို ညှပ်မလို့ပါပဲ။ သူက လူကြောက်တာကြောင့် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကို သွားမယ်ဆိုရင် ဟန်နာမပါလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ ဟန်နာအားတဲ့နေ့ကိုစောင့်ရင်း သူ့ ဆံပင်တွေက အခုလိုပဲဖြစ်လာတာ။
"မင်းရဲ့ အရှေ့ဆံပင်တွေက စိတ်ပျက်စရာကောင်းလိုက်တာ..."
သူ့နဖူးရှင်းသွားတယ်လို့ ယွန်းချီခံစားလိုက်ရတယ်။ သူ့အရှေ့ဆံပင်တွေကို ကြက်မောက်သီးက စုကိုင်လိုက်တာပဲ။ ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲက သားရေပင်တစ်ကွင်းနဲ့ ယွန်းချီအရှေ့ဆံပင်တွေကို ထောင်ထောင်လေးဖြစ်အောင် သူက ချီလိုက်တယ်။ ရုတ်တရက်ဆန်လွန်းတဲ့ ကြက်မောက်သီးရဲ့အပြုအမူကြောင့် ယွန်းချီရဲ့မျက်တောင်တွေက ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ပေါ့။
ဆံပင်တွေအုပ်နေတာကြောင့် စိတ်မရှည်နိုင်တဲ့ ခန့်ဝေသော်တစ်ယောက် ယွန်းချီရှေ့က ဆံပင်တွေကို ဆွဲစုစည်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ယွန်းချီရဲ့မကျဉ်းမကျယ်နဖူးလေးထွက်လာတယ်။ နောက်တော့ မျက်မှန်အောက်က မျက်လုံးတောက်တောက်လေးတွေ။ ဒီမျက်လုံးလေးတွေက သူ့ရဲ့နတ်ဘုရားမလေးမျက်လုံးတွေနဲ့တူတယ်လို့ ခန့်ဝေသော်ခံစားလိုက်ရတယ်။ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်တောင်တွေက အဲ့လောက်ထိ ရှည်ဖို့ လိုအပ်လို့လား။ ယွန်းချီရဲ့ မျက်တောင်တွေက ရှည်တဲ့အပြင်ကော့လည်းကော့နေတာပဲ။ ယွန်းချီရဲ့မျက်လုံးတောက်တောက်လေးတွေကတော့ မျက်ကပ်မှန်ကူထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ သူ့ရဲ့အလှနတ်ဘုရားမလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံထဲက မျက်လုံးလေးတွေက မျက်ကပ်မှန်ကူထားတာများလား။
အာ... သူ အခု သူ့ရဲ့အလှနတ်ဘုရားမလေးနဲ့ ယွန်းချီကို နှိုင်းယှဉ်နေမိတာလား?! ဒါ... ဒါက အရမ်းကို မိုက်ရိုင်းတဲ့အတွေးပဲ! သူ့ရဲ့အလှနတ်ဘုရားမလေးကတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့မှာပဲ!
ခန့်ဝေသော်ရဲ့အတွေးတွေကို ယွန်းချီကြားရင်တော့ ရယ်ရမလား ငိုပဲငိုရတော့မလားလို့ တွေးနေတော့မှာပါပဲ။ အချိန်အကြာကြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သူတို့စိုက်ကြည့်နေကြပြီးမှ ခန့်ဝေသော်စကားပြန်စတယ်။
"မင်းက ငါတို့အုပ်စုနဲ့ Assignment အတူတူလုပ်ဖို့ ကျတာမဟုတ်လား..."
ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို လာရှာတဲ့အဓိကအကြောင်းက Assignment ဆိုတာကို သိတော့မှပဲ ယွန်းချီရဲ့စိတ်ထဲက အလုံးကြီးပြန်ကျသွားတော့တယ်။ တော်သေးတာပေါ့! သူ အထိုးမခံရတော့ဘူး။
ယွန်းချီရဲ့အသံသေးသေးလေးကြောင့် ခန့်ဝေသော် သူ့ကို ကျဉ်စက်နဲ့အတို့ခံလိုက်ရသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ယွန်းချီရဲ့ အသံက ဘာလို့ သေးသေးညက်ညက်လေးဖြစ်နေရတာလဲ။ ယောကျာ်းလေးမဆန်လိုက်တာ။
ကိုယ့်အုပ်စုထဲကကောင်တွေအကြောင်းကို သိတာကြောင့် ခန့်ဝေသော် ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲပြောလိုက်တယ်။ ယွန်းချီရဲ့နဖူးရှေ့ထောင်နေတဲ့ဆံပင်လေးက ချက်ချင်းညှိုးကျသွားသလိုပဲ။ နောက်ပြီးတော့ မျက်နှာလေးရောပဲ။ ဒါပေါ့ ဘယ်သူက တစ်ဖွဲ့လုံးစာ Assignment ကို တစ်ယောက်တည်း လုပ်ချင်မှာလဲလေ။ အသင်းအဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ခွဲဝေလုပ်ကြဖို့လေ။ အဲ့ဒါကို စူပါမန်းလုပ်ပြီး တစ်ကိုယ်တော်ရှိုးအနေနဲ့တော့ ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။
"ငါ... ငါ ဝိုင်းလုပ်ပေးမယ်..."
လွယ်အိတ်ကြိုးလေးတင်းတင်းကိုင်ပြီး တစ်ယောက်တည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့မျက်နှာနဲ့ပေမဲ့ သူ့ကို ပြန်လည်းမပြောရဲတဲ့ ယွန်းချီကို ခန့်ဝေသော်အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့နဲ့ပြောတယ်။ သူ တစ်ယောက်ယောက်ကို စကားအကြာကြီးမပြောဖူးဘူးလေ။ သူ လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆယ်စက္ကန့်လောက်တစ်နေရာတည်းမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိတာက ရန်ဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ သုံးစက္ကန့်လောက် မျက်လုံးချင်းဆုံတာက ဆွဲထိုးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယွန်းချီနဲ့နှစ်ယောက်တည်း အခုလို ရန်မဖြစ်ဘဲ အကြာကြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရတာက သူ့ကို အနည်းငယ်အို့တို့အမ်းတန်းဖြစ်စေတယ်။
ဝိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားတာနဲ့ ယွန်းချီခေါင်းလေးငုံ့ပြီး မပြောရဲလို့ စိတ်ထဲမှာ အောင့်သက်သက်ဝလုံးလေးတွေရေးနေရာကနေ ခေါင်းကို ဆတ်ခနဲမော့တယ်။ ခန့်ဝေသော်ကတော့ သူ့နားထင်ကိုသူ လက်ညှိုးလေးနဲ့ကုတ်နေခဲ့တယ်။ အနည်းငယ် နီသလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာက ခန့်ဝေသော်က သူ့စကားအတွက် သူ ရှက်နေတယ်လို့ ပြောပြနေသလိုပါပဲ။
ကြက်မောက်သီးရဲ့ ဘယ်သူတစ်ယောက်မှ မမြင်ဖူးလောက်တဲ့ အမူအရာကြောင့် ယွန်းချီအံ့သြသွားတယ်။ နောက်တော့ သူ ပြုံးပြီး...
ယွန်းချီရဲ့အပြုံးတွေက ချယ်ရီပန်းတွေလိုပဲ လှတယ်။ လေအဝေ့ကြောင့် ကြွေကျလာတဲ့ ချယ်ရီပွင့်ဖတ်တချို့က ယွန်းချီရဲ့ခေါင်းပေါ်နဲ့ သူတို့နားထပ်ကျလာပြန်တယ်။ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် ပြုံးတာက အရမ်းကိုပဲ လှလားလို့ ခန့်ဝေသော်တွေးဖြစ်တယ်။ သူ သားရေပင်နဲ့စည်းထားတာကြောင့် ယွန်းချီရဲ့မျက်နှာကို အုပ်နေတဲ့ဆံပင်တွေလည်း မရှိတော့တာကြောင့် လေးကိုင်းလိုမှိတ်ကျသွားတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေကိုလည်း သူ မြင်လိုက်ရတယ်။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးနီသွားသလို သူ့ရင်ကလည်း တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာတော့တယ်။ ယွန်းချီရဲ့အခုလိုပြုံးလိုက်တဲ့ ပုံစံက ဘာလို့ သူ့နတ်ဘုရားမလေးနဲ့ တူနေတာလဲ။ ယွန်းချီရဲ့ နာမည်တစ်လုံးကလည်း သူ့နတ်ဘုရားမလေးနဲ့ တူနေသေးတယ်။
ခန့်ဝေသော် အလေးအနက်စဉ်းစားလိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က မောင်နှမများလား?!
"Assignment လုပ်ဖို့အတွက် ငါတို့ချိန်းစရာရှိတာ၊ ပြောစရာရှိတာပြောရအောင် မင်းရဲ့ account ပေး..."
ခန့်ဝေသော်ရဲ့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့စကားကြောင့် ယွန်းချီခေါင်းညိတ်ပြီး ပေးမလိုလုပ်ပြီးမှ အရေးကြီးတာကို သတိရသွားတော့တယ်။ စိတ်ထဲမှာ အရမ်းလန့်သွားတာကြောင့် လက်ကတုန်ပြီး ဖုန်းတောင် လွတ်ကျတော့မလိုပဲ။ လွတ်ကျမလိုဖြစ်သွားတဲ့ ဖုန်းကို ယွန်းချီအသေအကြေဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ ခန့်ဝေသော်ကို ကြည့်တယ်။
ယွန်းချီရဲ့မျက်နှာသေလေးနဲ့ လိမ်လိုက်မှုကို ခန့်ဝေသော်က သံသယမဝင်ခဲ့ဘူး။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဟိုက်ပါကောင်လေးက သူတို့လို SNS တွေမသုံးတာက ဟုတ်လောက်တယ်လို့ပဲ ထင်နေတယ်။ ဒါကြောင့် သူ အရမ်းကြီးတွေးမနေတော့ဘူး။
"အဲ့ဒါဆိုရင် ငါ့ကို ဖုန်းနံပတ်ပေး... ငါ ဖုန်းဆက်တာဖြစ်ဖြစ် message က တစ်ဆင့်ဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်လိုက်မယ်... မင်း Viber လောက်တော့သုံးတယ်မဟုတ်လား..."
ခန့်ဝေသော်ရဲ့ မယုံသကာင်္မဖြစ်မှုကြောင့် ယွန်းချီစိတ်သက်သာရာရသွားပြီးသူ့ရဲ့ဖုန်းနံပတ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ပေးလိုက်တော့တယ်။ သူ ခန့်ဝေသော်ကို သူ့အကောင့်ကြီးကို ပေးလို့မဖြစ်ဘူးလေ။ မဟုတ်ရင် ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို ယွန်း မှန်းသိသွားမှာပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် ဘာဖြစ်နိုင်လဲ ယွန်းချီတွေးတောင်မတွေးရဲဘူး။ ခန့်ဝေသော်က ယွန်းကို အရမ်းသဘောကျတာကြောင့် သူသာ ယွန်းဆိုတာကို သိရင်...
အတွေးနဲ့တင် ယွန်းချီကျောချမ်းသွားတယ်။ ကောလဟလတွေအရဆိုရင် ခန့်ဝေသော်က ရန်ဖြစ်လို့လက်လွန်ရင် တောင်ပေါ်ကနေ လူတွေကိုပစ်ချတာတဲ့။ ဒါကြောင့် ပျောက်သွားတဲ့လူတွေကို ပြန်မတွေ့တာတဲ့။ သူ အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ သွားဆုံရလောက်တယ်။ ယွန်းချီ တွေးရင်းနဲ့ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထလာတော့တယ်။ ဟင့်အင်း သူက ယွန်းဆိုတာ ခန့်ဝေသော် သိလို့မရဘူး။ ဒါက သူ သေတဲ့အထိ တိတ်တိတ်လေး သိမ်းသွားမဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ပဲ!
"ဒါဆို ငါ ပြန်တော့မယ်နော်..."
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ကြောက်နေပြီမို့ ယွန်းချီတစ်ယောက် ခန့်ဝေသော်ရှေ့ လစ်ထွက်ဖို့ကို ကြံစည်တော့တာပေါ့။ သူ ကားမှတ်တိုင်သွားမယ်၊ ကားစီးမယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ပွန်းချိကို အစာကျွေးမယ်။ ပြီးရင်စာလုပ်မယ်။ ဘာလို့ဆို ဟန်နာက ဝတ်စုံသစ်တစ်စုံချုပ်နေတာမို့ သူ့ဆီကို မလာနိုင်သေးဘူးလေ။ သူ အသစ်တစ်ပုံတင်ထားတာက မကြာမှ မကြာသေးတာပဲ။
ခန့်ဝေသော်ရဲ့အဖြေကိုစောင့်တောင်မနေဘဲ ယွန်းချီတစ်ယောက်လှည့်လိုက်တော့တယ်။ သူ လှည့်နေတုန်းမှာ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အသံက ထွက်လာတော့တာပဲ။ ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို ယွန်းလို့သိသွားပြီလားဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်နဲ့ ယွန်းချီ ပြန်လှည့်ကြည့်ရပြန်တယ်။ ခန့်ဝေသော်က သူ့ပါးကို လက်ညှိုးနဲ့ကုတ်နေပြန်ပြီးတော့...
"ငါ မင်းကို ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်..."
ယွန်းချီရဲ့မျက်လုံးတွေဝိုင်းစက်သွားတော့တယ်။ ခန့်ဝေသော်က သူ့ကိုသံသယဝင်နေပြီလား! တစ်ခုခုကို ရိပ်မိသွားတာလား! ဒါကြောင့်ပဲ သူ့အိမ်ထိလိုက်စစ်တော့မှာလား! သူတော့ တောင်အောက်ကို ရောက်တော့မှာလား! ပျောက်သွားတဲ့သူတွေနဲ့သွားဆုံစည်းရတော့မှာလား! အမေရေ... သားပျောက်နေရင် သားအလောင်းလေးကိုတော့ တွေ့အောင် ရှာပါနော်... ယွန်းချီအတွေးတွေက ယောက်ယက်ခတ်သွားတော့တယ်။
"ဘာလို့ဆို Assignment ကို မင်းအိမ်မှာလည်း လုပ်ရနိုင်တာမို့ ငါ မင်းအိမ်ကို သိဖို့လိုတယ်လေ..."
ယွန်းချီပါးစပ်လေးအိုပုံသဏ္ဍန်ဖြစ်သွားပြီး ခန့်ဝေသော်ကို ခေါင်းညိတ်ပြတယ်။ စိတ်ထဲကတော့ အလုံးကြီးကျသွားတော့တာပေါ့။ ခန့်ဝေသော်ရဲ့အတွေးတွေက အမြဲတမ်း Assignment မှာ ရှိနေတာပဲ။ တော်သေးတယ်!
ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို ယွန်းချီငြင်းမှာစိုးလို့ ထပ်တောင်ပြောမိသေးတယ်။ ယွန်းချီက သူ့နတ်ဘုရားမလေးနဲ့ နည်းနည်းတူတယ်လို့ ခံစားရတာကြောင့် သူ ယွန်းချီအနားမှာ အချိန်နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်ပိုရှိချင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယွန်းချီကိုလည်း သူ မသိစေချင်ဘူး။ နောက်ပြီး တခြားသူတွေလည်း မသိစေချင်ဘူး။ ဘာလို့ဆို ဒါက မဟာအရှက်ကွဲမဲ့ကိစ္စကြီးလေ။ သူ တစ်ကျောင်းလုံးက ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင်ကြောက်ရတဲ့ ခန့်ဝေသော်က အခုလိုမျိုး ကောင်လေးတစ်ယောက်နားမှာ အချိန်ဖြုန်းချင်တယ်ဆိုတာကြီးက လူဟားစရာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့။ ပြီးတော့! ယွန်းချီလည်း ပျော်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ဘယ်ယောကျာ်းလေးမှ သူတို့ကို မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တူတာကြောင့်ဆိုပြီး ပြောဆိုရင် ကြိုက်မယ်လို့ သူ မထင်ဘူးလေ။
ယွန်းချီခေါင်းလေးငုံ့ပြီး သဘောတူလိုက်တယ်။ ခန့်ဝေသော်က Assignment နဲ့ပတ်သက်တာကို တွေးနေသရွေ့ ယွန်းချီစိတ်ထဲ ကြောက်မနေပါဘူး။ ခန့်ဝေသော်က ကောလဟလတွေလောက် ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးပဲလို့ ယွန်းချီတွေးလိုက်သေးတယ်။ သူ့ရဲ့အပြင်အဆင်တွေက နည်းနည်းလေး လမ်းသူရဲဆန်ပေမဲ့ ခန့်ဝေသော်က သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တစ်ဖွဲ့တည်းကျတဲ့သူတွေကိုတော့ နည်းနည်းဂရုစိုက်တတ်ပုံရပါတယ်။ အခုပဲကြည့်လေ။ သူတို့က အခုမှ စကားပြောဖူးကြပေမဲ့ ခန့်ဝေသော်က သူ့ကို အိမ်လိုက်ပို့ပေးတယ်။
ယွန်းချီက ဆိုင်ကယ်စီးတတ်ပေမဲ့ သူ့အိမ်က သူ့ကိုစိတ်မချတာကြောင့် ဘတ်စ်ကားနဲ့ပဲ ကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်း လုပ်ရတယ်။ ဘတ်စ်ကားခက များလှတယ်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ ပိုက်ဆံကိုတော့ ယွန်းချီခြွေတာချင်တယ်။ ဘာလို့ဆို သူ လိုချင်တာလေးတွေ ဝယ်လို့ရနိုင်တယ်လေ။ ဒီတော့ ခန့်ဝေသော်သာ သူ့ကို အမြဲတမ်းလိုက်ပို့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ ယွန်းချီစဉ်းစားမိတယ်။ ဒါဆို တစ်လစာ ဘတ်စ်ကားခကို သူ မုန့်စားလို့ရပြီ! လမ်းထိပ်က အသစ်ဖွင့်တဲ့ bakery လေးက ကိတ်မုန့်လေးတွေ သူ စားချင်တယ်!
ခန့်ဝေသော်ကတော့ ယွန်းချီရဲ့စိတ်ထဲမှာ သူက ဖရီးကယ်ရီဖြစ်သွားတာကို မသိလိုက်ရှာပါဘူး။ ဆိုင်ကယ်စက်ကို နှိုးပြီးတော့ ယွန်းချီကို ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို သူ ကမ်းပေးလိုက်တယ်။
"မင်း ဆောင်းထားလိုက်... တောင်အဆင်းလေက အေးတယ်..."
ယွန်းချီရဲ့ပုံက ခပ်ပျော့ပျော့လေးမို့ မလိုအပ်ဘဲ ယွန်းချီနေမကောင်းဖြစ်သွားမှာကို သူ မလိုချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ခန့်ဝေသော် ယွန်းချီကို သူဆောင်းရမဲ့ဦးထုပ်ကပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။
ယွန်းချီရဲ့မဝံ့မရဲမေးသံက ရှက်ရိပ်နွေးနွေးပါနေသလိုပါပဲ။ ခန့်ဝေသော် သူ့ရင်ထဲကို ကြောင်လေးတစ်ကောင်က လက်သည်းသေးသေးထုတ်ပြီးတော့ ကျီစားလိုက်သလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ ခပ်တည်တည်နဲ့စိတ်ကို ပြန်ထိန်းပြီး သူ ယွန်းချီကို ကြည့်တယ်။
တောင်အဆင်းမှာ ခန့်ဝေသော်ရဲ့ ရင်က နွေးနေခဲ့တယ်။ အရင်တုန်းကဖြတ်လာတဲ့ လမ်းတွေက ဒီနေ့ ပိုလှနေသလိုပဲ။ ယွန်းချီက သူ့ခါးကို ခပ်တင်းတင်းဖက်ထားတယ်။ ဦးထုပ်ခံနေတာကြောင့် ယွန်းချီရဲ့ပါးက သူ့ကျောကို အပ်မနေနိုင်ခဲ့ဘူး။ ခန့်ဝေသော် စိတ်ထဲနည်းနည်းလေး နောင်တရချင်သွားတယ်။ သူ ဦးထုပ်ကိုသာ မပေးခဲ့ရင် ယွန်းချီက သူ့ ကျောမှာ မျက်နှာဝှက်လောက်တယ်လေ။
တိတ်! ငါ ဘယ်လိုတွေတွေးနေတာလဲ! ခန့်ဝေသော် စိတ်ထဲကနေပဲ သူ့ကိုယ်သူ အော်လိုက်တယ်။ သူ့နှလုံးသားမှာ နတ်ဘုရားမလေးရှိနေတာကို သူက ဘာကိစ္စနဲ့ ယွန်းချီအကြောင်းပဲ စဉ်းစားနေရတာလဲ! ဒါက လုံးဝကို မိုက်မနေဘူး!
ဘယ်လိုပဲ ခန့်ဝေသော် သူ့ကိုယ်သူ ယွန်းအကြောင်းတွေးနေနေ သူ့ခါးကိုတင်းတင်းဖက်ထားတဲ့ ယွန်းချီရဲ့ လက်လေးတွေကြောင့် သူ့နှုတ်ခမ်းတွေပြုံးနေမိတယ်ဆိုတာကိုတော့ သူ ဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။
ယွန်းချီအိမ်ရှေ့ရောက်ချိန်မှာ ခန့်ဝေသော်ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးက အေးစက်နေပြီ။ လေတိုက်တာကို နောက်စရာများမှတ်လို့။ သူတော့ အိမ်ရောက်တာနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးသာ မနေဘူးဆိုရင် မနက်ဖြန် ဖျားလိမ့်မယ်။ ဒါ လုံးဝသေချာတယ်။
"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... မင်း အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဂရုစိုက်ဦးနော်..."
ယွန်းချီရဲ့အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ဂရုစိုက်မှုက ခန့်ဝေသော်ရဲ့ အေးနေတဲ့မျက်နှာကို ချက်ချင်းကို နွေးသွားစေတယ်။ သူ ခပ်တောင့်တောင့်ပဲ ခေါင်းညိတ်ပြပြီး ယွန်းချီကမ်းပေးတဲ့ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ကို လှမ်းယူတယ်။ ယွန်းချီရဲ့လက်နဲ့သူ့လက်က မတော်တဆထိသွားလေရဲ့။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ မျက်နှာက ပြိုင်တူနီးပါး ခပ်ရဲရဲဖြစ်သွားကြတယ်။ သူတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မကြည့်ကြတော့ဘူး။ ဘာကြောင့်မှန်းလည်း သူတို့ကိုယ်သူတို့ မသိကြဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မကြည့်ရဲတာတော့အမှန်ပါပဲ။
ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကို ကိုင်ရင်းကနေ ခန့်ဝေသော် သူ့ခေါင်းကို စွပ်မလို့လုပ်တယ်။ ယွန်းချီကတော့ သူ ဆိုင်ကယ်မထွက်မချင်း တစ်ထပ်ခွဲတိုက်ပုလေးရှိတဲ့ခြံဝန်းရှေ့မှာ ရပ်နေပေးမယ်ထင်ပါရဲ့။
ယွန်းချီကို ခန့်ဝေသော် စကားစတယ်။ ယွန်းချီကလည်း သူ့ စလွယ်သိုင်းလွယ်ထားတဲ့ လွယ်အိတ်ကြိုးလေးကို ခပ်တင်းတင်းကိုင်ပြီး ခန့်ဝေသော်ကို ခေါင်းငုံ့နေရာကနေ မော့ကြည့်လာတယ်။
"မင်း ဆံပင်တွေရှည်နေတာကြောင့် ငါ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကို လိုက်ပို့ပေးမယ်လေ... ငါ သိတဲ့ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် ကောင်းကောင်းရှိတယ်..."
ခန့်ဝေသော် ဒီစကားကိုပြောတဲ့အချိန်မှာ သူ ယွန်းချီကို ကြည့်မနေခဲ့ပါဘူး။ သူ့ မျက်နှာတစ်ခုလုံးက နီရဲနေတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူ ဒီနေရာကနေ ဆိုင်ကယ်အမြန်မောင်းပြီး ထွက်ပြေးသွားလိုက်ချင်တယ်။
"အင်း အသေးစိတ်ကို မင်းအိမ်ရောက်ရင်ပြောလေ..."
ဆိုင်ကယ်စီးပြီးပြန်တဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ ခန့်ဝေသော်ရဲ့နားထဲမှာ ယွန်းချီရဲ့အသံသေးသေးလေးက ပဲ့တင်ထပ်နေဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူ့မျက်နှာမှာလည်း အပြုံးပန်းတွေနဲ့ပေါ့။
ThiHla 25.11.2019, 02:01 4.9
Yamoneee 25.11.2019, 01:33 5
KimYooHyun 24.11.2019, 10:04 5
MyatSuMay 24.11.2019, 08:13 4.9
ချယ်ရီပင်အောက်ကပုံရိပ်လေးတွေ ဘယ်လောက်လှနေလိုက်မလဲ 😍
Chue (MiKhoon) 24.11.2019, 07:50 5
MaskMelon 24.11.2019, 06:44 5
Khant D 24.11.2019, 06:04 4.8
လူဆိုးကောင်လေးက ရှက်နေတာတဲ့ 😂
Nyo Lae 24.11.2019, 05:46 5
အားးးးး ခန့်ဝေသော်လေးရဲ့ချစ်လိုက်တာ ☹️